ONLINE ပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ မတင် သင့်တဲ့ RELATIONSHIP နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အရာ (၁၂) ချက်… - POPPIN NEW
ONLINE ပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ မတင် သင့်တဲ့ RELATIONSHIP နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အရာ (၁၂) ချက်…
August 1, 2019 ဗဟုသုတ
Online ပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ မတင် သင့်တဲ့ Relationship နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အရာ (၁၂) ချက်
ကိုယ့်ရဲ့ relationship အကြောင်းကို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပိုစ့်တင်ခြင်းဟာ သာမာန် ကိစ္စသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စုံတွဲတိုင်း သတိထားရမယ့် အချက်က ဘယ်အရာတွေ ကိုတော့ မျှဝေသင့်ပြီး ဘယ်လိုအရာတွေကို မမျှဝေသင့်ဘူး ဆိုတာကိုပါ ပဲ …. ။ တချို့စုံတွဲတွေ ကတော့ မမျှဝေသင့် တာကို မျှဝေမိတဲ့ အတွက် လူအထင် သေးမှု၊ ရှုံ့ချမှုနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ကြုံတွေကြ ရတာကို သတိထားကြည့် နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ relationship နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပိုစ့်တစ်ခုခု တင်တော့မယ် ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူကို မေးမြန်းသင့်ပြီး နှစ်ယောက်စလုံး အတွက် ထိခိုက်မှု မရှိတဲ့ အကြောင်း အရာတွေကိုသာ မျှဝေပေးသင့် ပါတယ်နော် ….. ။
၁။ အိပ်ခန်းထဲက မြင်ကွင်းတွေ
အိပ်ခန်းထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူနဲ့ အတူ သို့မဟုတ် တယောက်တည်း ဖြစ်စေ လူတွေကို အမျိုးမျိုး ထင်မြင်စေမယ့် ပိုစ့်မျိုးတွေကို စနောက်ခြင်း အနေနဲ့ တောင်မှ မတင်သင့်ပါဘူး။ ဒီလို တင်ခြင်းကြောင့် သင်နဲ့သင့်ချစ်သူကို အပေါစား ဆန်သူ၊ မရင့်ကျက်သူတွေ အဖြစ် လူတွေက ထင်မှတ်စေ နိုင်ပြီး သင်တို့ဆက်ဆံရေးရဲ့ ယုံကြည်မှု ကိုလည်း ပျက်စီးစေနိုင် ပါတယ် …. ။
၂။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ
တကယ်တော့ ယခုလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ မျှဝေခြင်းကို စုံတွဲတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း တောင်မှ ရှောင်ရှားသင့် ပါတယ်။ ကိုယ်ငယ်ငယ်က စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ်နေပုံတွေ ကိုယ့်ရဲ့ကလေးဘဝ ပုံတွေကို public ချပြတာကို ဘယ်သူကမှ မနှစ်သက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားသူတွေရဲ့ personal အကြောင်းတွေကို လေးစားပြီး ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော် …. ။
၃။ ချွဲနွဲ့ပြီး ရိုပြနေတာတွေကို အရမ်းမတင်ပါနဲ့
သင်တို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်စနိုးတဲ့ ခေါ်တဲ့နာမည်ပြောင်တွေ၊ နှစ်ယောက်တည်းပြောတတ်တဲ့ လှို့ဝှက် စကားလုံးတွေကို ထိန်းသိမ်းထားသင့် ပါတယ်။ ဒီလိုအရာတွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ share လိုက်ရင် သင့်ရဲ့ relationship အတွက် မည်သည့် လေးစားမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုကိုမှ ရရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဒါ့အပြင် သင်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ connection ကိုလည်း လျော့ကျစေပါလိမ့်မယ် …. ။
၄။ သင့်ချစ်သူ သဘောမကျတဲ့ ပုံတွေကို မတင်ပါနဲ့
သင့်ရဲ့ချစ်သူ ပါးစပ်ဟပြီး အိပ်နေတဲ့ပုံဟာ သင့်အတွက်တော့ ချစ်စရာကောင်းချင် ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ပေမယ့် သူမအတွက်တော့ ယခုလို ပုံပျက် ပန်းပျက် ပုံမျိုးတွေကို အခြားသူတွေ မြင်သွားမှာ မနှစ်မြိုပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အမှား တစ်ခုကို မလုပ်မိခင် သူမဆီက အရင်ဆုံး ခွင့်တောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော် …. ။
၅။ ကတောက်ကဆ ဖြစ်တာတွေ
ကတောက်ကဆ ဖြစ်တာတွေကို public မှာ မျှဝေတတ်ပြီး မကြာခဏ ပြန်တည့်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေကို သင်မြင်ဖူး ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဆိုတာ သင်တို့ရဲ့ အရှုပ်ထုပ်တွေကို ရှင်းဖို့နဲ့ ရင်ဖွင့်ဖို့အတွက် နေရာကောင်း တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ယခုလို တင်တာဟာ သင့်နဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ သူစိမ်းအားလုံး မြင်တွေ့နေရတာကို သတိရပါ။ သင်ယခုလို တင်လို့လည်း သင့်ချစ်သူကလွယ်လွယ်နဲ့ သင့်ကို ပြန်ခွင့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေရဲ့ ကဲ့ရဲ့မှု ကိုသာ ခံရ ပါလိမ့်မယ် …. ။
၆။ နမ်းနေတဲ့ ဆယ်ဖီတွေ
သင်တို့နှစ်ယောက် နမ်းနေတဲ့ ဆယ်ဖီတွေကို ဘယ်သူမှမြင်တွေ့လိုကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် သင့်ထက်အကြီးတွေ မိဘတွေမြင်အတွက် မကောင်းသလို အပေါစားဆန်စေပါတယ်။ သင့် fri list ထဲက single fri တွေအတွက်လည်း ယခုလိုပုံမျိုးတွေကို မြင်ရတဲ့အခါ ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး …. ။
စုံတွဲ အမြောက် အများဟာ ချစ်သူကဈေးကြီးတဲ့ လက်ဆောင်တွေ ဝယ်ပေးတဲ့ အချိန်တိုင်း ဝမ်းသာအားရနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ကြွားဝါ တတ်ပါတယ်။ ဒီလို တင်ခြင်းကြောင့် သင့် fri list ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ယခုလိုမျိုး မပေးနိုင်တဲ့ အခြား စုံတွဲတွေမှာ စိတ်ဓါတ် ကျမှုတွေ ပြဿနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုကို လူတွေ အာရုံစိုက်လာအောင် လုပ်နေသလို မျိုးလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ငကြွားစုံတွဲလို့ ယူဆကြ ပါလိမ့်မယ် ….. ။
၈။ ရန်လိုတဲ့ အကြောင်းအရာများ
လူတွေ အတော်များများဟာ သူတို့ချစ်သူကို ဘယ်လိုလုပ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ ချိန်းခြောက်မှုဆန်ဆန် ပိုစ့်တွေကို တင်တတ်ကြတာ သင်သတိထားမိ ပါလိမ့်မယ်။ တခါတလေ ချစ်သူနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို အမည်မပါပဲ ကြိမ်းဝါးနေတာတွေ ကိုလည်း သင်မြင်တွေ့နိုင် ပါတယ်။ ဒီလိုပိုစ့်တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ သဝန်တိုမှုကို ပြသရာရောက်တယ်လို့ ထင်မှတ်ပေမယ့် လူအများ အမြင်မှာတော့ သင့်ချစ်သူကို အထင်သေးမှုတွေ စက်ဆုပ်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ relationship နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခြားသူတွေရဲ့ မှတ်ချက်တွေ နဲ့လည်း ချစ်သူကို ပညာပေးဟန်တွေ မပြောမိဖို့ လိုပါတယ်နော် ….. ။
၉။ အထောက်အထား သက်သေပြတဲ့ ပိုစ့်တွေကိုလည်း မတင်ပါနဲ့
ဖေ့ဘွတ်က like နဲ့ share အရေအတွက်ဟာ သင့်တို့ relationship ဘယ်လောက်ထိ အောင်မြင်နေလဲဆိုတာကို တိုင်းတာလို့ မရပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးကို သက်သေပြဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ လူတွေ နှစ်သက်အားကျလာအောင် အမြဲတမ်း ကြိုးစားနေခြင်းကြောင့် မစစ်မှန်တဲ့ ခံစားချက်နဲ့ လုပ်ရပ်တွေ အမြစ်တွယ်လာ တတ်ပါတယ် …. ။
၁၀။ ယောက္ခမအကြောင်း အဆိုးမြင်ပိုစ့်တွေ
တကယ်လို့ ယောက္ခမအကြောင်း အဆိုးမြင်တွေကို တင်တတ် ရင်တော့ သင်ပြုတဲ့ ကံတရားက သင့်နောက်ကနေ ရောက်လာတတ် ပါတယ်။ သင့်ယောက္ခမဟာ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ မိဘတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတင်ခြင်းဟာ သင့်လက်တွဲဖော်ကို နာကျင်စေယုံ သာမက အနာဂါတ်မှာ မိသားစုအတွင်း ပဋိပက္ခတွေကို ဖြစ်လာစေနိုင်တယ် ဆိုတာကို သတိရပေးပါတယ် …. ။
၁၁။ သင်တို့ လမ်းခွဲခြင်း အကြောင်း အသေးစိတ်တွေ
မကြာခင်က လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ အတွက် သင်ရင်ဖွင့်ချင် တာတွေကို သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးတွေအား အပြင်မှာ ရင်ဖွင့်လို့ ရပါတယ်။ ဆိုရှယ် မီဒီယာမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သင်ကလမ်းခွဲရတဲ့ အကြောင်းရင်း အသေးစိတ်တွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ တင်ရင် သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သင့်ဖက်ကနေ ထောက်ခံတာတွေ၊ နာတာတွေ ရှိလာတဲ့ အတွက် ကွန်းမန့်ပေးကြ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ တန်ဖိုးဟာလည်း ပိုမို ကျဆင်းနိုင် ပါတယ် …. ။
၁၂။ အသေးအဖွဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုလည်း မတင်ပါနဲ့
စုံတွဲတိုင်းဟာ ချစ်သူသက်တမ်းနှစ်ပတ်လည်တွေ၊ မွေးနေ့တွေ ဆိုရင် ပိုစ့်တင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ် ကြပါတယ်။ ဒီလိုအရာတွေကို တစ်ခါတစ်လေ တင်တာက ပြဿနာ မဟုတ်ပေမယ့် တစ်နေကုန် ဖြစ်နေတာတွေကို တင်နေရင်တော့ လူတွေ မျက်စိနောက် သလို သင့်တို့ နှစ်ယောက်လည်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ငြီးငွေ့လာ ပါလိမ့်မယ် နော် …. ။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေ ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ နေ့စဉ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာတွေ အသေးစိတ်ကို မျှဝေနေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ သင်တို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်သွေးတဲ့ ပိုစ့်တွေကို တင်နေမယ့် အစား ပညာပါတဲ့ပိုစ့် ဆင်ခြင်တုံ တရား ရှိတဲ့ ပိုစ့်တွေကိုသာ တင်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက် ပါတယ်နော် ….. ။
Crd LM Naung Naung Lifestyle Myanmar
Online ပျေါမှာ ဘယျတော့မှ မတငျ သငျ့တဲ့ Relationship နဲ့ ပတျသတျတဲ့ အရာ (၁၂) ခကျြ
ကိုယျ့ရဲ့ relationship အကွောငျးကို ဆိုရှယျမီဒီယာမှာ ပိုဈ့တငျခွငျးဟာ သာမာနျ ကိစ်စသာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စုံတှဲတိုငျး သတိထားရမယျ့ အခကျြက ဘယျအရာတှေ ကိုတော့ မြှဝသေငျ့ပွီး ဘယျလိုအရာတှကေို မမြှဝသေငျ့ဘူး ဆိုတာကိုပါ ပဲ …. ။ တခြို့စုံတှဲတှေ ကတော့ မမြှဝသေငျ့ တာကို မြှဝမေိတဲ့ အတှကျ လူအထငျ သေးမှု၊ ရှုံ့ခမြှုနဲ့ မလိုလားအပျတဲ့ ပွဿနာတှကေို ကွုံတှကွေ ရတာကို သတိထားကွညျ့ နိုငျပါတယျ။ တကယျလို့ ကိုယျ့ရဲ့ relationship နဲ့ ပတျသတျပွီး ပိုဈ့တဈခုခု တငျတော့မယျ ဆိုရငျ အရငျဆုံး ကိုယျ့ရဲ့ ခဈြသူကို မေးမွနျးသငျ့ပွီး နှဈယောကျစလုံး အတှကျ ထိခိုကျမှု မရှိတဲ့ အကွောငျး အရာတှကေိုသာ မြှဝပေေးသငျ့ ပါတယျနျော ….. ။
၁။ အိပျခနျးထဲက မွငျကှငျးတှေ
အိပျခနျးထဲမှာ ကိုယျ့ရဲ့ ခဈြသူနဲ့ အတူ သို့မဟုတျ တယောကျတညျး ဖွဈစေ လူတှကေို အမြိုးမြိုး ထငျမွငျစမေယျ့ ပိုဈ့မြိုးတှကေို စနောကျခွငျး အနနေဲ့ တောငျမှ မတငျသငျ့ပါဘူး။ ဒီလို တငျခွငျးကွောငျ့ သငျနဲ့သငျ့ခဈြသူကို အပေါစား ဆနျသူ၊ မရငျ့ကကျြသူတှေ အဖွဈ လူတှကေ ထငျမှတျစေ နိုငျပွီး သငျတို့ဆကျဆံရေးရဲ့ ယုံကွညျမှု ကိုလညျး ပကျြစီးစနေိုငျ ပါတယျ …. ။
၂။ ပုဂ်ဂိုလျရေးဆိုငျရာ အသေးစိတျ အခကျြအလကျမြား
တကယျတော့ ယခုလို ပုဂ်ဂိုလျရေးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ အခကျြအလကျတှေ မြှဝခွေငျးကို စုံတှဲတှမှေ မဟုတျပါဘူး၊ သူငယျခငျြး အခငျြးခငျြး တောငျမှ ရှောငျရှားသငျ့ ပါတယျ။ ကိုယျငယျငယျက စိတျလှတျ ကိုယျလှတျနပေုံတှေ ကိုယျ့ရဲ့ကလေးဘဝ ပုံတှကေို public ခပြွတာကို ဘယျသူကမှ မနှဈသကျမှာ မဟုတျပါဘူး။ အခွားသူတှရေဲ့ personal အကွောငျးတှကေို လေးစားပွီး ထိနျးသိမျးပေးဖို့ လိုအပျပါတယျနျော …. ။
၃။ ခြှဲနှဲ့ပွီး ရိုပွနတောတှကေို အရမျးမတငျပါနဲ့
သငျတို့နှဈယောကျက တဈယောကျကို တဈယောကျ ခဈြစနိုးတဲ့ ချေါတဲ့နာမညျပွောငျတှေ၊ နှဈယောကျတညျးပွောတတျတဲ့ လှို့ဝှကျ စကားလုံးတှကေို ထိနျးသိမျးထားသငျ့ ပါတယျ။ ဒီလိုအရာတှကေို ဆိုရှယျမီဒီယာမှာ share လိုကျရငျ သငျ့ရဲ့ relationship အတှကျ မညျသညျ့ လေးစားမှုနဲ့ ယုံကွညျမှုကိုမှ ရရှိလိမျ့မညျ မဟုတျပါ။ ဒါ့အပွငျ သငျတို့ နှဈယောကျရဲ့ ထူးခွားတဲ့ connection ကိုလညျး လြော့ကစြပေါလိမျ့မယျ …. ။
၄။ သငျ့ခဈြသူ သဘောမကတြဲ့ ပုံတှကေို မတငျပါနဲ့
သငျ့ရဲ့ခဈြသူ ပါးစပျဟပွီး အိပျနတေဲ့ပုံဟာ သငျ့အတှကျတော့ ခဈြစရာကောငျးခငျြ ကောငျးပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့ပမေယျ့ သူမအတှကျတော့ ယခုလို ပုံပကျြ ပနျးပကျြ ပုံမြိုးတှကေို အခွားသူတှေ မွငျသှားမှာ မနှဈမွိုပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ အမှား တဈခုကို မလုပျမိခငျ သူမဆီက အရငျဆုံး ခှငျ့တောငျးဖို့ လိုအပျပါတယျနျော …. ။
၅။ ကတောကျကဆ ဖွဈတာတှေ
ကတောကျကဆ ဖွဈတာတှကေို public မှာ မြှဝတေတျပွီး မကွာခဏ ပွနျတညျ့ကွတဲ့ စုံတှဲတှကေို သငျမွငျဖူး ပါလိမျ့မယျ။ တကယျတော့ ဆိုရှယျမီဒီယာ ဆိုတာ သငျတို့ရဲ့ အရှုပျထုပျတှကေို ရှငျးဖို့နဲ့ ရငျဖှငျ့ဖို့အတှကျ နရောကောငျး တဈခု မဟုတျပါဘူး။ ယခုလို တငျတာဟာ သငျ့နဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယျခငျြး၊ သူစိမျးအားလုံး မွငျတှနေ့ရေတာကို သတိရပါ။ သငျယခုလို တငျလို့လညျး သငျ့ခဈြသူကလှယျလှယျနဲ့ သငျ့ကို ပွနျခှငျ့လှတျမှာ မဟုတျပါဘူး။ လူတှရေဲ့ ကဲ့ရဲ့မှု ကိုသာ ခံရ ပါလိမျ့မယျ …. ။
၆။ နမျးနတေဲ့ ဆယျဖီတှေ
သငျတို့နှဈယောကျ နမျးနတေဲ့ ဆယျဖီတှကေို ဘယျသူမှမွငျတှလေို့ကွမှာမဟုတျပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ သငျ့ထကျအကွီးတှေ မိဘတှမွေငျအတှကျ မကောငျးသလို အပေါစားဆနျစပေါတယျ။ သငျ့ fri list ထဲက single fri တှအေတှကျလညျး ယခုလိုပုံမြိုးတှကေို မွငျရတဲ့အခါ ကောငျးတဲ့ခံစားခကျြဖွဈလာမှာမဟုတျပါဘူး …. ။
စုံတှဲ အမွောကျ အမြားဟာ ခဈြသူကဈေးကွီးတဲ့ လကျဆောငျတှေ ဝယျပေးတဲ့ အခြိနျတိုငျး ဝမျးသာအားရနဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာမှာ ကွှားဝါ တတျပါတယျ။ ဒီလို တငျခွငျးကွောငျ့ သငျ့ fri list ထဲမှာ ရှိနတေဲ့ ယခုလိုမြိုး မပေးနိုငျတဲ့ အခွား စုံတှဲတှမှော စိတျဓါတျ ကမြှုတှေ ပွဿနာတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ သငျတို့ရဲ့ကွှယျဝမှုကို လူတှေ အာရုံစိုကျလာအောငျ လုပျနသေလို မြိုးလညျး ဖွဈစနေိုငျပွီး ငကွှားစုံတှဲလို့ ယူဆကွ ပါလိမျ့မယျ ….. ။
၈။ ရနျလိုတဲ့ အကွောငျးအရာမြား
လူတှေ အတျောမြားမြားဟာ သူတို့ခဈြသူကို ဘယျလိုလုပျရငျ ဘယျလိုဖွဈမယျ ဆိုတဲ့ ခြိနျးခွောကျမှုဆနျဆနျ ပိုဈ့တှကေို တငျတတျကွတာ သငျသတိထားမိ ပါလိမျ့မယျ။ တခါတလေ ခဈြသူနဲ့ ပတျသတျပွီး တဈယောကျယောကျကို အမညျမပါပဲ ကွိမျးဝါးနတောတှေ ကိုလညျး သငျမွငျတှနေို့ငျ ပါတယျ။ ဒီလိုပိုဈ့တှဟော ကိုယျ့ရဲ့ သဝနျတိုမှုကို ပွသရာရောကျတယျလို့ ထငျမှတျပမေယျ့ လူအမြား အမွငျမှာတော့ သငျ့ခဈြသူကို အထငျသေးမှုတှေ စကျဆုပျမှုတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ relationship နဲ့ပတျသတျပွီး အခွားသူတှရေဲ့ မှတျခကျြတှေ နဲ့လညျး ခဈြသူကို ပညာပေးဟနျတှေ မပွောမိဖို့ လိုပါတယျနျော ….. ။
၉။ အထောကျအထား သကျသပွေတဲ့ ပိုဈ့တှကေိုလညျး မတငျပါနဲ့
ဖဘှေ့တျက like နဲ့ share အရအေတှကျဟာ သငျ့တို့ relationship ဘယျလောကျထိ အောငျမွငျနလေဲဆိုတာကို တိုငျးတာလို့ မရပါဘူး။ ကမ်ဘာကွီးကို သကျသပွေဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့။ လူတှေ နှဈသကျအားကလြာအောငျ အမွဲတမျး ကွိုးစားနခွေငျးကွောငျ့ မစဈမှနျတဲ့ ခံစားခကျြနဲ့ လုပျရပျတှေ အမွဈတှယျလာ တတျပါတယျ …. ။
၁၀။ ယောက်ခမအကွောငျး အဆိုးမွငျပိုဈ့တှေ
တကယျလို့ ယောက်ခမအကွောငျး အဆိုးမွငျတှကေို တငျတတျ ရငျတော့ သငျပွုတဲ့ ကံတရားက သငျ့နောကျကနေ ရောကျလာတတျ ပါတယျ။ သငျ့ယောက်ခမဟာ သငျ့လကျတှဲဖျောရဲ့ မိဘတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုတငျခွငျးဟာ သငျ့လကျတှဲဖျောကို နာကငျြစယေုံ သာမက အနာဂါတျမှာ မိသားစုအတှငျး ပဋိပက်ခတှကေို ဖွဈလာစနေိုငျတယျ ဆိုတာကို သတိရပေးပါတယျ …. ။
၁၁။ သငျတို့ လမျးခှဲခွငျး အကွောငျး အသေးစိတျတှေ
မကွာခငျက လမျးခှဲလိုကျတဲ့ အတှကျ သငျရငျဖှငျ့ခငျြ တာတှကေို သငျ့ရဲ့ သူငယျခငျြး အရငျးကွီးတှအေား အပွငျမှာ ရငျဖှငျ့လို့ ရပါတယျ။ ဆိုရှယျ မီဒီယာမှာတော့ မဟုတျပါဘူး။ တကယျလို့ သငျကလမျးခှဲရတဲ့ အကွောငျးရငျး အသေးစိတျတှကေို ဆိုရှယျမီဒီယာမှာ တငျရငျ သငျ့ရဲ့ သူငယျခငျြးတှကေ သငျ့ဖကျကနေ ထောကျခံတာတှေ၊ နာတာတှေ ရှိလာတဲ့ အတှကျ ကှနျးမနျ့ပေးကွ ပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့အပွငျ သငျ့ရဲ့ပုံရိပျနဲ့ တနျဖိုးဟာလညျး ပိုမို ကဆြငျးနိုငျ ပါတယျ …. ။
၁၂။ အသေးအဖှဲ့ကိစ်စတိုငျးကိုလညျး မတငျပါနဲ့
စုံတှဲတိုငျးဟာ ခဈြသူသကျတမျးနှဈပတျလညျတှေ၊ မှေးနတှေ့ေ ဆိုရငျ ပိုဈ့တငျဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနတေတျ ကွပါတယျ။ ဒီလိုအရာတှကေို တဈခါတဈလေ တငျတာက ပွဿနာ မဟုတျပမေယျ့ တဈနကေုနျ ဖွဈနတောတှကေို တငျနရေငျတော့ လူတှေ မကျြစိနောကျ သလို သငျ့တို့ နှဈယောကျလညျး တဈယောကျကို တဈယောကျ ငွီးငှလေ့ာ ပါလိမျ့မယျ နျော …. ။ လူတိုငျးဟာ ကိုယျပိုငျဘဝတှေ ကိုယျစီ ရှိကွပါတယျ။ နစေ့ဉျ ဖွဈပကျြနတေဲ့ အရာတှေ အသေးစိတျကို မြှဝနေဖေို့ မလိုအပျပါဘူး။ သငျတို့ရဲ့ ကိုယျရညျသှေးတဲ့ ပိုဈ့တှကေို တငျနမေယျ့ အစား ပညာပါတဲ့ပိုဈ့ ဆငျခွငျတုံ တရား ရှိတဲ့ ပိုဈ့တှကေိုသာ တငျဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျ ပါတယျနျော ….. ။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့လူနာဖြစ်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဆေးကုသခန်းထဲမှာပဲ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ပါတယ်
Pop Pin New July 9, 2019
စွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ မိခင်အတွက် ဝမ်းနည်းစွာ သီချင်း သီဆိုခဲ့တဲ့ မိဘမဲ့ကျောင်းမှ ကလေးငယ်
Pop Pin New January 30, 2019
ဆင်းရဲသားလူနာတွေအတွက် အခမဲ့ကုသပေးတဲ့အပြင် နေ့လည်စာပါ စီစဉ်ပေးတဲ့ ညောင်လေးပင်က နှလုံးလှ ဆရာဝန်ကြီး
Pop Pin New May 11, 2019
Pop Pin New June 24, 2019
ကလေးဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ(၇)မျိုး
သတိမထားမိဘဲ ချစ်သူအပေါ် သစ္စာမဲ့နေတဲ့ အပြုအမူ(၅)မျိုး
မိုးကြီးပြီး မော်လမြိုင်တွင် တစ်မြို့လုံးနီးပါးရေမြုပ်နေသောကြောင့် အရေးပေါ်
ကင်ဆာကြောင့်သေစရာမလိုတော့ပါဘူး ကင်ဆာ ရောဂါဖြင့် မသေစေရ ကင်ဆာအဆင့် ၄ ကို …
ယိုယွင်းနေတဲ့ မြန်မာပြည်ကျန်းမာရေးစနစ်ရဲ့ နောက်ထပ် မြေစာပင်လေးတပင်ဖြစ်သွားရတဲ့ သားလေး
ကံကြမ္မာက မျက်နှာသာ မပေးလို့ သေကွဲ ကွဲခဲ့ရတဲ့ အသက် ၁၇ …
ONLINE ပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ မတင် သင့်တဲ့ RELATIONSHIP နဲ့ …